सीप र ज्ञान भित्र्याउने पहल गर्छु
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को दशक लामो इतिहासमा पहिलो पटक भएको चुनावबाट निर्वाचित शेष घलेले संघमा राजनीतिक रंग हुन नहुने बताएका छन। अस्ट्रेलियाको धनी सूचीमा घले १ सय ७६औं स्थानमा छन्। घले मेलबर्नस्थित इन्स्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजी (एमआइटी) का सञ्चालक हुन्।
सात अर्बको लगानीमा घलेले नेपालमा होटेल सेराटनको साझेदारीमा पाँचतारे काठमाडौं सेराटन समेत खोल्दैछन्। अध्यक्षमा निर्वाचित भएका घलेसँग एनआरएनएको अभियान र लगानीका बारेमा गरिएको कुराकानी ।
गैरआवासीय नेपाली संघको इतिहासमा अध्यक्ष पदमा पहिलो पटक निर्वाचनबाट चुनिएर आउनुभएको छ। निर्वाचित भएर आएपछि कसरी समेटेर लैजाने सोचमा हुनुहुन्छ?
मेरो घोषणापत्रमा एकता र समावेशीतालाई मूल मर्म मानेको छु। यही मूल मर्मको आधारमा संस्थालाई अघि बढाउनेछु। प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार निर्वाचन भएको हो। निर्वाचनको प्रक्रियामा पाँच जना अध्यक्षले उम्मेदवारी दिनुभएको थियो। निर्वाचनको प्रक्रियाबाट तीन जनाले छोड्नुभयो। निर्वाचनमा म र तेन्जी शेर्पा मात्रै भयौं। निर्वाचनमा विजयी हुनेबित्तिकै मैले यो विजय तेन्जीजीको पनि हो भनेको छु। तेन्जीजी मात्रै होइन यो सबै एनआरएनको जीत हो। निर्वाचित भएर आएपछि सबैलाई समेटेर लैजाने जिम्मेवारी आएको छ। प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएको नतिजालाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। मैले पहिला पनि भनेको थिए अध्यक्ष बाहेकका अरु पदाधिकारीमा निर्वाचन हुँदा कुनै समस्या भएको छैन।
निर्वाचनपछि संस्थालाई कसरी अघि बढाउने योजनामा हुनुहुन्छ?
मैले घोषणापत्र अनुसार काम अघि बढाउनेछु। संस्थालाई अघि बढाउन अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउनेछु। म टिमवर्कमा विश्वास गर्ने व्यक्ति हो। संस्थालाई सामूहिकतामा अघि बढाउनेछु। दुई वर्ष, पाँच वर्ष र दश वर्षमा के गर्न सकिन्छ भनेर योजना बनाउने सोचमा छु। केही नयाँ कार्यक्रम पनि बनाउने योजनामा छु। मैले संघ दर्ताको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको थिए। अहिले हाम्रो संस्था दर्ता भइसकेकोले मेरा लागि बोनस भएको छ। अब मेरो एजेन्डामा नयाँ काम गर्नुपर्ने भएको छ। मेरो कार्यकालमा संघको भवन बनाउनेतर्फ लाग्छु। अब संघको भवन स्थापनाको लागि वैधानिकता समेत तयार भएको छ। सम्पत्ति खरीद गर्ने वैधानिकता समेत प्राप्त भएको छ।
एक दशकको अवधिमा एनआरएनए अभियानमा धेरै गफ र थोरै काम भए भन्ने आरोप छ नि?
एक दशकको अवधि ठूलो होइन। हाम्रो संस्था विस्तारै बामे सर्दै अघि बढेको छ। यो संस्थाको भविष्य एकदमै उज्वल छ। यो अवधिमा ठूला लगानी आउन नसकेको पक्कै हो। तर लगानी बाहेक गैरआवासीय नेपालीसँग सीप र ज्ञान धेरै छन्। नेपालको विकासमा ज्ञान र सीप प्रयोग हुन सकेको छैन। यो अवधिमा ज्ञान र सीप भित्र्याउने काम धेरै हुन सकेको छैन। मेरो कार्यकालमा सीप र ज्ञान भित्र्याउनेतर्फ पहल गर्नेछु।
गैरआवासीय नेपालीबाहेक प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागि गैरआवासीय नेपालीले पुलको काम पनि गर्न सकेको देखिदैन नि?
लगानीका लागि लगानी मैत्री नीति आवश्यक पर्छ। नेपालको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्वन्धी ऐन बीस वर्षदेखि पुनरावलोकन हुन सकेको छैन। यो नीति पुनरावलोकनको लागि तयारी भइरहेको थाहा पाएको छु। सन् १९९२मा आएको यो ऐन अहिलेसम्म परिवर्तन नहुँदा लगानी आउन कठिन भएको छ। लगानीका लागि ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट नीति नै छैन। लगानी आउनको लागि स्पस्ट नीति आवश्यक पर्छ। अर्को मुलुकमा रहेका कर्मचारीतन्त्रको व्यवहारले समेत लगानी आउन सकेको छैन। लगानीको प्रमुख वाधक भनेको कर्मचारीतन्त्र समेत हो।
ऐन/नियम भन्दा पनि एउटा हाकिमको भरमा काम हुन्छ? यस्तो अवस्थामा लगानी आउन कठिन हुन्छ। मैले यसो भनिरहँदा यहाँ राम्रा कर्मचारी छैनन् भन्ने होइन तर लगानीका लागि कर्मचारीतन्त्रले पनि लचिलो भइदिनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा विदेशीले यहाँ आएर लगानी गर्नसक्ने क्षमता हुँदैन। विदेशी लगानी मात्रै ल्याउने प्रयास गर्नुभन्दा संयुक्त लगानीलाई अघि बढाउनुपर्छ। स्थानीय साझेदारसँग विदेशी लगानी ल्याउन भित्र्याउने विकल्प सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। तर संयुक्त लगानीको लागि यहाँका साझेदार पारदर्शी हुन आवश्यक छ।
गैरआवासीय नेपाली अभियानले खाडी र मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुको समस्या समेट्न सकेन भन्ने गुनासो छ नि?
गैरआवासीय नेपालीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको लागि पनि काम गर्दै आएको छ। यो दीर्घकालिन प्रक्रिया हो। स्वदेशमा रोजगारी नभएपछि विदेशमा जानु अहिलेको वाध्यता हो। तर विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धारकर्ता गैरआवासीय नेपाली हुन भन्ने अपेक्षा राख्नुहुँदैन। यसमा राज्यको दायित्व बढी हुन्छ भने कामदार लिने राष्ट्रको पनि उतिकै हुन्छ। हामी पनि समस्यामा परेका नेपालीको लागि कुनै न कुनै रुपमा सहयोग गर्ने हो।
विभिन्न संस्थाहरुको समन्वयमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको समस्या समाधानको प्रयास गर्न सक्छौ। अर्को वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीसँग सरकारले रकम लिएको छ। तर त्यो रकम त्यतिकै थन्किएर बसेको छ। वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन खर्च बोर्डमा रहेको पाँच अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँको प्रभावकारी परिचालन गर्नका लागि सरकारलाई घच्घचाउनेछौं। यो बाहेक वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुको उद्धारका लागि छुट्टै कोष बनाउनेछौं।
गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले खुलमखुल्ला समर्थन गरे नि?
छ महिनाको अवधिमा मैले २५ वटा मुलुक घुमेको छु। २५ मुलुकमा घुमेकोले मेरो आत्मबल समेत बलियो थियो। निर्वाचनको अवधिमा केही राजनीतिक रंगहरु देखिएको मैले पाए। तर मेरो हकमा भने लागु भएन। म अस्ट्रेलियन नागरिक हो। अर्को कुरा संस्थाको गरिमाका आधारमा राजनीतिभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। निर्वाचनको प्रक्रियामा कुनै राजनीतिक दाग लागेको छैन भन्ने म पूर्ण विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। अर्को कुरा जुनसुकै राजनीतिक दलसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने भएकोले कुनै दल विशेषको झन्डा बोक्नुहुँदैन, मैले बोकिन पनि।